Lamadegaan la mood (; ) waa nooc ka mid ah cimilada deegaanada hella roob aad u yar sanadkii, kuwaasi oo ka baxaan noocyo kooban oo dhir ah.
Lamadegaan (; ) (sidoo kale loo yaqaano Saxare) waa deegaan aan lahayn biyo iyo dhir; isla markaana leh heerkul aad u kulul wakhtiga maalintii iyo qaboow daran habeenkii. Lamadegaanku waa meelo aad ugu yar yahay roobku taasi oo keentay biyo la'aan daran iyo abaaro joogto ah. In kastoo ay ku kala duwan yihiin bixitaanka dhirtu aad ayay ugu yar tahay ama kamaba jirto ayaa la odhan karaa deegaanada saxaraha ah; sababta ugu weeynina waa biyo la'aanta ka jirta lamadegaanka. Af Soomaali ahaan ereyga "lamadegaan" (Lama-Degaan) wuxuu ka turjumayaa deegaano aan la degi karin ama nolosha dadka iyo xoolaha taageeri karin. Ereyga "Saxare" waxaa laga soo xigtay luuqada Carabiga, waana la micno ereyga Lamadegaan. In ku dhow hal meel sadex meelood (1/3) oo ah oogada dhulka ayaa ah lamadegaan ama saxare-lamood (badh-lamadegaan; "semi desert"). Dhulkaasi waxaa ka mid ah xataa cidhifyada aduunka (Cidhifka Waqooyi iyo Cidhifka Koonfur) halkaasi oo leh roob aad u yar, mararka qaarna looguba yeedho "Lamadegaanka Qaboow". Saxaraha waxaa lagu kala soocaa ayadoo la fiirinayo xadiga roob ee meeshaas ka da'a, heerkulka ay gaadho, waxyaabaha sababey saxaranimada deegaankaasi iyo meesha uu dhaco dhulkaasi juquraafi ahaan. Carada saxaraha inta ugu badan waa mid bataax ah oo ka kooban budo iyo boodh, sababtoo ah marka heerkul aad u sareeya oo kuleyl badan iyo hawo awood badani isku hesho carada ayaa waxay keentaa in burubur toos ah ku dhaco dhismaha caradaasi, taasi oo inta badan ka dhigta mid bataax iyo boodh ka samaysan.
Last edited on 29 Sebteembar 2021, at 11:37